Global Voices teny Malagasy » Fantaro ireo Tanora Ekoadaoriana Mampihodina ny Radio Amin’ny Fiteny Kichwa Voalohany Ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Janoary 2017 4:53 GMT 1	 · Mpanoratra Christina Noriega Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Ekoatora, Etazonia, Mediam-bahoaka, Tanora, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
Charlie Uruchima ao amin'ny Radio El Tambo Stereo ao Bronx, Saripika avy amin'i Itzel Alejandra Martinez ho an'i Remezcla. Nahazoana alalana.
Ny manaraka etoana dia tsonga nalaina ka nahitsy avy amin'ny lahatsoratra fenon'ny mpanoratra ho an'i Remezcla, ary azo vakiana ato .
Tsy lavitra an'i Bronx Atsimo amin'ny zoron'ny bodegas, mpivarotra amoron-dalana ary ny Kianjambe Yankee, no ijoroan'ny tranobe iray vasobasoka tsy voamarika loatra. Tsy ho hitanao avy eto ivelany izany, saingy ao anatin'io [tranobe io] no miorina ny efitra fandraisampeon'ny radio sady toerana mahasarika ireo vazimba Kichwas Ekoadaoriana , vondrom-piarahamonina iray tombanana ho miisa 10.000 eo ho eo, ao New York City. Mifangarika amin'ny teny espaniola, anglisy, eny fa na Spanglisy tenenina ambonin'ny tany aza, dia amin'ny endrika tononkalo, tononkira, ary adihevitra ao amin'ny studio na efitra fandraisam-peo no fenoin'ny fiteny nentin-drazana Kichwa.
Naorina tamin'ny taona 2014 ny Kichwa Hatari, seho radio voalohany eo amin'ny firenena miely amin'ny teny Kichwa, tenim-paritry ny Quechua ary fitenin'ny vazimba teratany Kichwas Ekoadaoriana. Nanomboka tamin'ny taompolo 1990s ny vondrom-piarahamonina vazimba avy ao Ekoadaoro no nifindra nankany Etazonia, indrindra fa tao New York City sy tanandehibe hafa, handositra ny fitotonganana ara-toekarena ao an-tanindrazana izay tena mamely mafy indrindra ny vazimba teratany. Fa na dia betsabetsaka ihany aza ny mponina ao aminy, dia matetika ny Kichwas no tsy hita ao anatin'ireo Ekoadaoriana sy ny mponina Latino amin'ny ankapobeny.
Ny tanjon'ny Kichwa Hatari, izay midika hoe “Kichwa miarina,” dia ny mba hahitana azy ireo indray sy ho feon'ny vazimba Ekoadaoriana ao amin'ny fampitam-baovao an-tserasera, avy amin'ny sy natao ho an'ny Kichwas. Isaky ny Azoma folakandro no mihaona ambanin'ny tany hiresaka hira, kolontsaina, fiteny, fijerin'ny vazimba izao tontolo izao, mbamin'ny olana atrehin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana ny mpanentan'ny Kichwa Hatari — Charlie Uruchima, Segundo Angamarca, Fabian Muenala, and Renzo Moyano — . Rehefa tafaraka izy efa-mianaka ireo no mahaforona tontolokelin'ny vondrom-piarahamonina Kichwa lehibe kokoa, misolotena taranaka indray mihira, fitaizanan ary tombontsoa samy hafa — sehon'ny “ fanehoana ny tena ka tsy matahotra ny hanao izany”:
Manentana ny olona amin'ny fandaharana izahay […] Nahita fiovana sasantsasany izahay. Taloha ny ankamaroanay natahotra ny hiseho amin'ny maha-izahay anay, saingy amin'izao fotoana izao, miteny amin'ny fiteny Kichwa ny olona eny an-dalambe, eny ambony fiaran-dalamby, any amin'ny efitra fihinanana. Mianjaika amin'ny fitafy nentin-drazana ny vehivavy. Tsy hita intsony izany tahotra izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/26/94911/